AMD Ryzen 5000 Mobile mapurosesa ari kurova malaptop. Ndeupi akakukodzera?
AMD yakafumura iyo Ryzen 5000 Mobile processor (CPU) kuCES 2021, ichizadza iyo Ryzen 5000 Desktop machipisi yakafumurwa kunonoka 2020. Saiyo iyo Ryzen 4000 Mobile CPUs pamberi, Ryzen 5000 Nhare yakakamurwa kuita H-akateedzana uye U-akateedzana. Iwo aimbove machipisi akagadzirirwa ekutamba uye ekugadzira malaptop, nepo ekupedzisira machipisi akagadzirirwa matete, akareruka malaptop ane snappy performance uye hwakareba hupenyu hwebhatiri.
Kune akatiwandei maCUU akasiyana mune yega yega akateedzana, uye isu tiri kutarisira kuti vaoneke mu yakanakisisa Windows Laptop sarudzo kunze uko. Kutenga chaiyo yezvido zvako kunogona kuoma. Isu tinoputsa zvinhu pasi apa kuti uve nechokwadi chekuti uri kuwana chaiyo Hardware yebasa riripo.
AMD Ryzen 5000 H-akateedzana Nhare dzePCU
Sezvo vamwe malaptop ane AMD Ryzen 5000 H-akateedzana maCPU akavhura, isu ticha tarisa pane yakasimba simba Hardware kutanga.
AMD inopatsanura yayo H-akateedzera Ryzen Mobile mapurosesa muzvikamu zvitatu, zvakanyanya seIntel inoita neCore yayo mutsara. Ipo paine Ryzen 3 machipisi mune yakaderera-inofambiswa U-nhepfenyuro mutsetse, H-dzakateerana dzinoitirwa kutamba uye kugadzira, saka AMD inotanga neRenzen 5 uye inokwira kuRenzen 9.
Ryzen 5 - 6 cores, 12 tambo
Ryzen 7 - 8 cores, 16 tambo
Ryzen 9 - 8 cores, 16 tambo
AMD yakavaka aya maCCU ane 7nm maitiro. Ivo vane TDP inotanga pa35W neiyo Ryzen 5 5600HS uye vanokwira kusvika ku45W + neiyo Ryzen 9 5980HX. Ngatinyatso tarisei maCPU aya anongowanikwa mumalaptop.
AMD Ryzen 5 5000 H-akateedzana maCPU
Kune maviri Ryzen 5 CPU mune ino kirasi: Ryzen 5 5600HS uye Ryzen 5 5600H. Imwe neimwe ine cores matanhatu uye tambo gumi nembiri, uye base base kumhanya kwe12GHz. Zvisinei, iyo "HS" vhezheni ine yakaderera 4.2W TDP ichienzaniswa ne35W TDP mu "H" vhezheni. Tarisira kuti uone iyo 45HS mumitambo malaptop ayo anoenda kune akaonda uye akareruka kutaridzika.
Chinonyanya kukosha: Ryzen 5 H-akateedzana maCPU ari akanakisa kusvetuka-kure poindi yevatambi uye vagadziri vasingatarise kusundira masystem avo kune iwo chaiwo ekupedzisira Vanodhura zvishoma, uye ivo vanofanirwa kuve sarudzo huru kune wepakati gamer kana musiki.
AMD Ryzen 7 5000 H-akateedzana maCPU
Ryzen 7 5000 CPU ndipo panogona kugara vanhu vazhinji. Pane sarudzo mbiri: iyo Ryzen 7 5800HS uye iyo Ryzen 5800H - imwe neimwe iine cores masere uye tambo gumi neshanu. Zvekare, iyo "HS" vhezheni inouya mune yakaderera 16W TDP, nepo "H" vhezheni ichirova yakakwira 35W TDP.
Aya maCCU anobata chero chero mutambo wazvino, uye ivo vanozoisa kurwa kwakasimba kurwisa kwakasimba dhizaini uye yekuvandudza software. Iwo ekuwedzera macores pamusoro peiyo Ryzen 5 machipisi anovaita iwo ari nani kune multitasking, uye ivowo vane yakakwira yekuwedzera wachi kumhanya.
Chinonyanya kukosha: Ryzen 7 H-akateedzana maCPU anofanirwa kuve sarudzo chaiyo kune vanhu vazhinji vane mari shoma yekushandisa. Vari kuenda kunotora mitambo yekumusoro-soro uye kugadzira mashandiro, uye ivo vanodhura zvakaderera pane Ryzen 9.
AMD Ryzen 9 5000 H-akateedzana maCPU
AMD Ryzen 9 5900HX 8 16 3.3GHz (4.6GHz) 20MB 7nm 45W +
AMD Ryzen 9 5980HX 8 16 3.3GHz (4.8GHz) 20MB 7nm%